Iziphi Izinyathelo Abadayisi Abazidingayo Ukuze Baphumelele Ku-inthanethi | Martech Zone
Ikhulu lama-21 leminyaka libone ukuvela kobuchwepheshe obuningi kangaka obusenza sikwazi ukumaketha ngempumelelo amabhizinisi ngendlela edidiyelwe futhi enomthelela uma kuqhathaniswa nesikhathi esedlule. Ukusuka kumabhulogi, ezitolo ze-ecommerce, ezimakethe ezikwi-inthanethi kuya eziteshini zokuxhumana, iwebhu isiphenduke inkundla yomphakathi yolwazi kumakhasimende okusesha nokuwadla. Ngokokuqala ngqa, i-Intanethi idale amathuba amasha amabhizinisi njengoba amathuluzi edijithali asizile ukuhlehlisa nokwenza imizamo yokukhangisa ezenzakalweni eziningi.
Kepha njengomthengisi eminyakeni yobudijithali, kungakucindezela ukuthi ungaqala kuphi uma kukhulunywa ngokuthola ukuthi amakhasimende akho akuphi nokuthi ungaxhumana kanjani nawo.
Ukuheha ukunakwa kwamakhasimende kuyinselele enkulu kunanini ngaphambili njengoba lokho kunakwa kusakazeka phakathi kweziteshi eziningi, amadivayisi, namapulatifomu. Ukwenza kube nzima kakhulu, imilayezo yendabuko yokusakaza ayisasebenzi. Amakhasimende afuna imilayezo efanele ifinyelela kubo ngokukhetha kwabo okuphakathi futhi ithunyelwe njengengxoxo. UMike Dover, umbhali ngokubambisana we WIKIBRANDS: Ukuphinda Uqambe Inkampani Yakho Emakethe Eqhutshwa Yikhasimende
Ngezinketho ezingapheli ezitholakala kwi-Intanethi, kunzima ukukhomba ukuthi yiziphi izinyathelo okudingeka zithathwe ukuze kwakhiwe isu elisebenzayo lokubandakanya amakhasimende ukusiza ukwakha ibhizinisi lakho. Kepha konke kuya ngokuthola ukuthi inkambo yakho yesenzo izoba yini. Abakhangisi badinga ukudala isu lokungagcini ngokuheha amakhasimende kuphela, kodwa ukwakha ubudlelwano besikhathi eside obunomthelela obakhelwe ekubonakaleni nasekuthembeni okuzodala ukuhweba nokuthembeka komkhiqizo.
Nawa amanye amathiphu wabakhangisi wokuthi bangakha kanjani isu lokumaketha eliphumelelayo:
Khomba izindlela ezintsha zokumaketha
Esikhundleni sokuchitha sonke isabelomali sakho ekuthengiseni kwendabuko njengezikhangiso zokuphrinta noma ezentengiso zomsakazo nezethelevishini, gxila kuziteshi zokumaketha ezidijithali ezizosiza ibhizinisi lakho likhule online. Ukumaketha okuhlanganisiwe kuhlanganisa izindlela ezindala zokukhangisa nobuchwepheshe banamuhla ngemikhankaso yokukhangisa nge-imeyili, ukubhuloga neziteshi zokuxhumana ezifana ne-Facebook noma i-Twitter. Amakhasimende anamuhla aguqukela ku-inthanethi ukuxhumana nemikhiqizo. Lezi zindlela azikuvumeli kuphela ukuthi uthuthukise ukufinyelela kwakho konke, kepha zandisa amathuba akho okuxhumana nezithameli ezibanzi.
Dala Isu Lokuqukethwe Elifanele
Ukwakha ubukhona bedijithali kumayelana nokushiya umkhondo wedijithali nokutholwa ngamakhasimende angaba khona. Emakethe yanamuhla, 70% yabathengi uncamela ukwazi inkampani ngolwazi lwangempela kunezikhangiso. Qala ukwakha ubudlelwano obungcono ngokwenza izinto obala kanye nokwethembana ngokwenza okuqukethwe okufanele, kwemultimedia. Amakhasimende ahlala efuna imininingwane online futhi esikhundleni sokwakha okuqukethwe ngenhloso yokwakha okuqukethwe, gxila embonini yakho ethile nasezihlokweni ezibandakanyayo. Awukhulisi nje kuphela ikhono lakho lokutholakala ku-inthanethi ngokuqukethwe okuhlobene, kepha futhi nokwakha idumela lakho njengesiphathimandla esithembekile. Faka inani elingaphezulu kokuqukethwe kwakho ngokungeza ezinye izinhlobo zemidiya njengezithombe, amavidiyo, kanye nama-podcast - lokhu kuzothuthukisa amathuba akho okutholakala ku-inthanethi ngokunikeza imininingwane ezuzisayo kumakhasimende akhona nalawo angahle abe khona.
Joyina Ingxoxo Namakhasimende Akho
Ukuxhumana namakhasimende akho kubalulekile. Noma ngabe impendulo elula ku-Twitter, ukuphendula imibuzo yabo ngokuxhaswa kwamakhasimende, noma ukubanikeza isivumelwano sangasese sokuthembeka kwabo, ukuzibandakanya kubalulekile lapho kwakhiwa ubudlelwane besikhathi eside nabathengi. Amakhasimende anamandla amakhulu nethonya eliningi kunangaphambili njengoba i-Intanethi yenze amazwi abo azwakala ngokuthunyelwe komphakathi, izinkundla nokubuyekezwa. Ukulalela nokuxhumana nabathengi kuvumela abathengisi ukuthi baqonde ukuthi yimiphi imiphakathi okufanele bangene kuyo nokuthi yiziphi izingxoxo okufanele babe yingxenye yazo.
Hlaziya Imizamo Yakho Yokumaketha
Ukuze uqonde ukuthi isu lakho lokuqukethwe lenza kahle kangakanani, kufanele uhlole izinombolo. Ngokuningiliziwe analytics, ungathola ukuqonda ukuthi yimaphi amabhulogi aphumelela kakhulu, ukuthi ufinyelela kuphi jikelele, nokuthi yiziphi izindawo okudingeka uthuthukise kuzo. Izibalo zibalulekile lapho kwakhiwa isu elisebenzayo lokumaketha ledijithali ngoba ngokuhamba kwesikhathi uzokwazi ukubikezela ukuthi yiziphi izitayela ezizokwenzeka, ukuthi imuphi uhlobo lwemidiya olwamukela kangcono uma kukhulunywa ngabalaleli bakho, nokuthi iziphi izindlela zokumaketha ezisebenza kangcono ebhizinisini lakho.
Ngaphandle kwecebo eliphelele lokubandakanya amakhasimende edijithali, abathengisi bazoqhubeka bangene ezikhaleni uma kuziwa ekwakheni umkhiqizo wabo. Esikhundleni sokugxila ezikhangisweni eziphoqelelwa kumakhasimende, abathengisi banamuhla kudingeka bathuthele indawo yedijithali futhi bakhe amasu wesikhathi eside agxile ekubandakanyeni okudonsa amakhasimende.
Kalula nje, kuqala ngokwakha isu lokumaketha lokuqukethwe elinamandla kanye nokuhlonza ukuthi yimaphi amathuluzi neziteshi zokumaketha ezidingekayo ukwaba nokusabalalisa. Lokhu kuhlangana kokudala kwe-multimedia, imithombo yezokuxhumana kanye analytics kubalulekile ekuphumeleleni ku-inthanethi noma ngabe uyibhizinisi elikhulu, ibhizinisi elincane, noma ungusomabhizinisi nje. Ukuzibandakanya kwakha ingxoxo eqala ngokusobala ngokusebenzisa ukumaketha kokuqukethwe, inika amandla wonke amakhasimende ukuthi akuthole ku-inthanethi ngemibuzo yosesho exhumanisa nesiza sakho.
Imakethe yanamuhla idinga ukuthi yonke imikhiqizo iqhudelane ngamanani futhi abathengisi abakuqondayo ukubaluleka kokwaneliseka, abathengi, nokuqhutshwa kwedatha yikhona okuzokwenza ukuthi umkhiqizo wabo uphumelele.
Tags: isu lokukhangisa lokuqukethweamasu wokuqukethweingxoxoamakhasimendeindawo yedijithaliubukhona bedijithaliFacebookUkukhangisa ku-Facebookiholoniukumaketha okuhlanganisiweizindlela zokumakethaimpumelelo yezokumakethaimpumelelo yokumaketha onlineokuqukethwe okufaneleingxoxo yezokuxhumanaTwitterUkumaketha kwe-Twitter
Ngokwesikhundla sakhe samanje, uRichard Hollis ungumnikazi, umsunguli kanye ne-CEO ye I-Holonis Inc., ezinze eSan Diego, California. Bebambisene nendodana yakhe, uHayden Hollis, laba bobabili baklama umbono wokwakha inkundla yebhizinisi lezokuxhumana elididiyelwe ngokugcwele, ebhekiswe ekuqondeni nasezimisweni zamaholoni, umqondo wokuthi isisombululo ngasikhathi sinye siyingxenye futhi sisonke. IHolonis inika amandla amabhizinisi abo bonke osayizi ngobuchwepheshe obudidiyelwe obumnandi, obulula, futhi obubizayo obusetshenziswayo, inhloso engqondweni ukukhahlela nokuqalisa kabusha umnotho wabo bonke abasebenzisi ukuze babe phambili ekuguqulweni kwedijithali okuvela ngokushesha okukhulu.
UChristoph C. Cemper - Impactana
Jul 3, 2015 ku-6: 10 AM
Ukuhlaziya imizamo yami yokumaketha kuyisinyathelo esibaluleke kakhulu kimi ngoba angifuni ukufaka imali namandla entweni engasebenzi ikakhulukazi uma nginenketho yokuyiqapha ukugwema lokho.
Okubaluleke ngokulinganayo, futhi ukusho lokho, kuthuthukisa isu lokuqukethwe elifanele. Ngokombono wami, lokho kudinga ukuqonda imakethe yakho nokuthi yini okusebenzayo, futhi kungani. Manje ukubheka izimpawu zomphakathi (i-Facebook, i-Twitter) kuyinto eyodwa ebalulekile, kepha ngithole izimboni eziningi ezijwayelekile ze-B2B kanye nezempilo, ezobuchwepheshe, ezomthetho njll hhayi ukuthi "zilungele kahle" kwezenhlalo. Yiqiniso. Kepha ukumaketha kokuqukethwe kwenzeka lapho futhi, awukuboni nje ngokubheka i-buzz yomphakathi kuphela. Kungakho ngakha isoftware yami entsha yokuhlaziya amasiginali we-Buzz avela ku-Social, kanye ne-Impact signals (njengokubandakanyeka komsebenzisi wangempela thru imibono, ukubukwa, ukuchofoza, izixhumanisi)
Umkhiqizo ubizwa ngokuthi yi-Impactana (http://www.impactana.com/ ) Futhi kungitshela ngqo engikudingayo ukwazi ukubona ukuthi hlobo luni lokuqukethwe olusebenze esikhathini esedlule kunoma iyiphi imboni, noma ngabe akuyona i-buzzworthy ”(okusho okuqukethwe kwekati le-Viral). Ngiphinde ngibone ukuthi ukumaketha kwami ​​okuqukethwe kuphumelele noma cha. Kubuye kungibonise ukuthi ukumaketha kokuqukethwe okuphumelelayo kubukeka kanjani noma ngabe kungokwami ​​noma esincintisana nami ukuze ngikwazi ukukusebenzisa njengomkhuba omuhle kakhulu wokwakha phezu kwawo. Mhlawumbe ufuna ukubheka ukuze ubone zonke izinketho ngokwakho futhi ungazise uma ukuthola kuwusizo. Kungakuhle ukuzwa kuwe.
Jul 3, 2015 ku-9: 22 AM
Ngiyabonga Cristoph! Ngizobe ngiyihlola.